Raw Nandrolone (Durabolin) vovoka Fambolena sy mpanome - orinasa
Ny steroidolone (Durabolin) roahin'ny anandrolahy (Durabolin) dia steroid anabolic synthetic izay manana toetra miavaka ary mety hahasoa amin'ny fitondran-tena amin'ny lahy sy ny vavy irery ihany, na ho fampifandraisana amin'ny TST ho an'ny lehilahy mpihatsaravelatsihy. Ny nandrolone dia manana halavam-potoana lava be ao amin'ny plasma ary fifandraisana miorina mafy ho an'ny mpanamboatra androgen.
Rano Nandrolone (Durabolin) vovoka (434-22-0) video
Rano Nandrolone (Durabolin) pohe (434-22-0) Description
Ny Nandrolone dia steroid anabolic synthetique izay manana toetra miavaka ary mety hahasoa amin'ny fitondrana ny fahasalaman'ny lehilahy irery, na ho fampifandraisana amin'ny TST ho an'ny lehilahy mpihatsaravelatsihy. Ny nandrolone dia manana halavam-potoana lava be ao amin'ny plasma ary fifandraisana matanjaka mifandraika amin'ny mpikatroka androgen. Ny anandrana nandrolone dia ampiasaina amin'ny fikarakarana ny anemia, cachexia (fandripahana syndrome), osteoporose, kanseran'ny nono ary famantarana hafa. Tsy mavitrika amin'ny vavany izy ireo ary tsy maintsy aterina amin'ny hozatra.
Nandrolone esters dia nofaritana sy nampidirina ho an'ny fampiasana ara-pahasalamana amin'ny faran'ny 1950. Ny iray amin'ireo AAS maneran-tany no tena ampiasaina eran-tany. Ankoatra ny fampiasana ara-pahasalamana, ny nandrolone esters dia ampiasaina hanatsarana ny vatana sy ny fahombiazany, ary lazaina fa ny ankamaroany nampiasan'ny AAS ho amin'izany tanjona izany.
Rano Nandrolone (Duraboline) vovoka (434-22-0) Specifications
Product Name Rano Nandrolone (Duraboline) vovoka
Anarana simika NADROLONE;NANDROLON;NANDROLONE;NORANDROSTENOLONE;NORTESTOSTERONE, 19-;(17beta)-estr-4-en-3-on ;17-beta-hydroestr-4-en-3-one ;17beta-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one
molekiolan'ny Formula C18H26O2
mitsonika Point 120-125 ° C
Toro-tavy: 357.38 ° C (tombanana)
Solubility Water Solubility, 0.0561 mg / mL
Application Ny nandrolone dia ampiasaina amin'ny fitondran'ny lehilahy ho salama irery, na ho fampifandraisana amin'ny TST ho an'ny lehilahy mpihatsaravelatsihy.